Ogaden News Agency (ONA) – Mudane Rayaale Xamud oo ugu baaqay Ugaaska iyo Suldaanka beelaha Shineele inay ka feejignaadaan khiyaanada TPLF
Mudane Rayaale Xamud oo ugu baaqay Ugaaska iyo Suldaanka beelaha Shineele inay ka feejignaadaan khiyaanada TPLF
Radi Xoriyo oo Wareysi dheer la yeeshay mudane Rayaale Xaamud ayuu ugu baaqay in dadka walaalaha ah ee wada daga deegaanka Shineele inay iska ilaaliyaan qorshaha Wayaanaha uu ku doonayo inuu isaga horkeeno.
Mudane Rayaale oo ah siyaasi caan ka ah dalka Ogadenya iyo guud ahaan Itobiya ayaa mar la weydiiyay sababaha keenay in shacabka Somalida ah ee deeganaa Shineele degmooyin ka mid ah lagu amray inay ka guuraan si loogu wareejiyo deegaanadooda gobolka Cafarta, wuxuu ku jawaabay inay arintan ku lug leedahay doorashooyinka soo socda iyo banaabaxyada lagaga soo horjeedo maamulka TPLF oo meela badan oo Itobiya ka socda. Qorshaha Wayaanaha ayaa ah in qawmiyadaha dariska ah la’iska horkeeno oo la’isku masquuliyo si caalamka loo tuso inay kala ilaalinayaan shacuubta deegaanada oo ay yidhaahdaan ka dib waxaan keenaynaa cidian kala dhex gala.
Mudane Rayaale Xaamud ayaa ugu baaqay Suldaanka Cafar iyo Ugaaska Ciise oo ah laba nin oo xikmad leh inay dajiyaan arinta iskana ilaaliyaan khiyaanada ay la maagan yihiin Wayaanaha. Labadan shacab ayuu ku tilmaamay inay is-dhex dagaan oo deegaanadooda ay isku dhex jiraan. Waa laba shacab oo walaala ah, isku diin ah oo wada daganaa, wax dhibaata ahna aanay dhex oolin.
Wuxuu ku tilmaamay mudane Rayaale in shacabka Shineele gabi ahaanba ay ka gadoodeen in laga raro deegaanada kala ah Cadaytu, Xundhufo, Gadhmalu iyo Afcase iyadoo lagu amray dadkii daganaa inay ka guuraan halkaa.
Wuxuu kaloo uu mudane Riyaale Xaamud bogaadin u diray N/hurayaasha CWXO iyo guud ahaan shacabka Somaliyeed ee Ogadenya isagoo ugu baaqay inay u midoobaan halganka xoriyad doonka ah ee socda.
Wareysigaa qiimaha leh halkan ka dhagayso.